Black garlic ecubuziwe - China Shandong Gongxian Gmengyuan
Black garlic uchungechunge
imikhiqizo Pepper uchungechunge
Bean imikhiqizo series
Chili Izingxenye & Izindandatho
Chili ishq / Chili Nechobozekile
Black garlic ecubuziwe
Incazelo garlic black Ngemva adluliselwa ngokusebenzisa biotech, abamnyama garlic ungavula amaprotheni ku 18 izinhlobo "amino acid" ezidingekile umzimba womuntu nsuku zonke, okungase ngokushesha amuncwa wumzimba. Esikhathini "Umklami Ukudla Uhlelo" umbiko isitshalo ukudla nocwaningo lokuvikela umdlavuza eyenziwa USNCI njengoba maphakathi cwaningo, cishe 48 izinhlobo ukudla ngempumelelo ahlelwe, phakathi lapho "garlic" kuyinto yesibili none. Black garlic ikakhulukazi iqukethe 18 amino acid, vita ...
Incazelo garlic omnyama
Ngemva adluliselwa ngokusebenzisa biotech, abamnyama garlic ungavula amaprotheni ku 18 izinhlobo "amino acid" ezidingekile umzimba womuntu nsuku zonke, okungase ngokushesha amuncwa wumzimba.
Esikhathini "Umklami Ukudla Uhlelo" umbiko isitshalo ukudla nocwaningo lokuvikela umdlavuza eyenziwa USNCI njengoba maphakathi cwaningo, cishe 48 izinhlobo ukudla ngempumelelo ahlelwe, phakathi lapho "garlic" kuyinto yesibili none.
Black garlic ikakhulukazi iqukethe 18 amino acid, amavithamini (C, B, A), ukulandelela izakhi (i-phosphorus, i-potassium, i-magnesium, i-sodium, i-calcium, i-calcium, i-silicon aluminium, zinc, selenium ne-germanium), i-sulphur compounds kanye carbohydrate.
Umsebenzi esibanzi garlic black ingaphezu izikhathi 10 kuka garlic oluvamile; umthamo wayo antioxidant kuyinto 15 ngaphezulu izikhathi kuka garlic abavamile.
Tian Koukuan, uchwepheshe eJapane odumile yamangqamuzana cell biology futhi onguprofesa Mie University ocwaningweni lakhe ibonisa ukuthi abamnyama garlic umthamo antioxidant liphakathi best ezingaphezu kuka-300 izinhlobo zokudla ne umsebenzi antioxidant umehluko.
Effect garlic omnyama
Anti-inflammatory: I allicin eziqukethwe garlic black has umphumela elwa namagciwane.
Anti-isimila umphumela: Black garlic bangavimbela kwezici "umdlavuza" nitrosamines, futhi zinqanda ukukhula amangqamuzana omdlavuza, ayihlabe "amangqamuzana omdlavuza". "Ajoene" (diallyl thiosulfate) uzinzile amakhemikhali futhi kunomphumela abalulekile inhibitory ku ukukhula isimila cells ahlukahlukene, ikakhulukazi wegazi amaseli.
Ukuvimbela isifo cardiocerebrovascular: Enye isidlaliso of "garlic abamnyama" eyanikezwa ososayensi kuyinto "igazi kadoti."
Ukukhuthaza ngalapho izinwele zikhula zibheke: Amafutha garlic black oluyingozi Ingasheshisa ukugeleza kwegazi isiqondiso (ndlala sebaceous) kanye izinwele follicle ukugeleza, ngaleyo ndlela athuthukise izinwele zikhula zibheke ngakhona. Ngaphezu kwalokho, libuye libe nomphumela oqabulayo nobumpandla
Ukuze uthuthukise umsebenzi mzimba: Animal ucwaningo ukukhombisa ukuthi fat-encibilikayo amafutha oluyingozi e "garlic abamnyama" kungaba ngokuphawulekayo ngcono umsebenzi phagocytic ka "macrophage" futhi kuthuthukise izivikeli mzimba.
Ukukhuthaza intelligence ukukhula: "omnyama garlic" izakhi kanye uvithamini B1 emzimbeni womuntu angakhiqiza "garlic Amine", kanye "nesweli Amine" ongakwazi ukukukhuthaza futhi ashukumise Vitamin-B1 umsebenzi, ngcono umphumela carbohydrate namachibi futhi lunikeze amandla anele amangqamuzana obuchopho ukulondoloza ukucabanga okusheshayo.
imiphumela yokudla okunempilo: garlic has eliphezulu kakhulu umsoco, futhi zonke izakhamzimba ezidingekayo ukuze umzimba womuntu.
Ukuvikela isibindi: Black garlic has umsebenzi enamandla kakhulu antioxidant. It singavimbela "peroxidase lipid" umonakalo kwesibindi cell ulwelwesi isakhiwo kanye nokuvikela isibindi.
Ukuze ekulawuleni amazinga kashukela egazini: omnyama garlic has nomthelela obonakalayo nokulawula kashukela.
Black garlic kunganciphisa ingozi yokuhlaselwa umdlavuza wendlala: germanium kanye selenium, zezakhi isibabule izakhi yezimbiwa e garlic abamnyama.
Ungathatha 2-3 izingcezu ngosuku. Okokuqala ungakwazi ikhasi nesweli bese badle ngqo. Black garlic Futhi ungenza izitsha kanye itiye, lapho exutshwe imiphumela engcono. Abantu nge high ukushisa yangaphakathi yanconywa ukuthatha usuku ngalunye. Abantu, ene-leukemia futhi izimpawu ezihlobene coagulation ukuphazamiseka kwempilo okuthile hhayi Kunconywa ukuba adle.
Black garlic iqukethe ezihlukahlukene izakhi trace kanye amavithamini ukuthi izidingo zomzimba womuntu. Kungaba ukwandisa polyphenol futhi unikeze abantu umsebenzi wapheka, futhi 18 izinhlobo amino acid.
Abantu abaphethwe noma iziguli: kwegazi, yensimbi ukuntula ne-calcium ukuntula; senhliziyo cerebrovascular; hyp
Previous: garlic Black powder
Okulandelayo: Garlic pepper fresh
Black Garlic Isitolo esidayisa yonke impahla Inani
Emzimbeni Garlic ishq
Emzimbeni sikagalikhi nengulube
isibilile Black Garlic
Gcwalisa Nge Black Garlic
Fresh ehlutshiwe Garlic
Garlic kanzulu Liquid
Garlic Inani eChina
Jwayelekile White Garlic
Organic isibilile Black Garlic
Quality Garlic ishq
garlic Black powder
Bagged multi - isigcebe sembali black garlic
Amadivayisi: Igumbi 1-101-1, Ukwakha 11, Hailiangyuanli, Cha 717, Fengming Road, Baoshan Street, Licheng District, Jinan Idolobha, Isifundazwe Shandong, China